वृद्धभत्ताको बहस : ५ हजार पुर्‍याउँदा साढे चार अर्ब भार थपिने | Ratopati
वृद्धभत्ताको बहस : ५ हजार पुर्‍याउँदा साढे चार अर्ब भार थपिने
ठोस नीति बनाएर भत्ता बाँड्न विज्ञको सुझाव
personएलिजा उप्रेती exploreकाठमाडौं access_timeचैत २६, २०७७ chat_bubble_outline0
अर्थशास्त्री केशव आचार्य वृद्धभत्ताको वर्तमान वितरण प्रणालीमै प्रश्न गर्छन् । कसले भत्ता पाइरहेको छ र कसले दोहोरो लिएको छ, यसमा सरकारको दृष्टि नपुगेको बताउँदै उनी भन्छन, ‘बृद्धबृद्धालाई प्राथमिकता दिएर उनीहरुलाई दरिलो बनाउने कि वृद्धभत्ता मात्र दिने भन्ने हो ? अहिलेको प्राथमिकता वृद्धभत्ता बढाउनुपर्ने हो कि त्यो रकम लगेर जनस्वास्थ्य अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा लगाउने हो ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थराज्य मन्त्री उदयसमशेर राणा वृद्धभत्ता कसलाई दिने÷ नदिने स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘वृद्धभत्ता दिनुपर्छ, तर वर्ग छुट्याएर । सक्षम वर्गले यस्तो भत्ता आफैंले अस्वीकार गर्नुपर्छ ।’
सरकारी तथ्यांकले अहिले यस्तो भत्ता लिनेको संख्या साढे १४ लाख भन्दा बढी रहेको देखाउँछ । भत्ता पाउने ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक १२ लाख ६६ हजार ५ सय ७० जना छन् भने ६० वर्ष माथिका (दलित) ज्येष्ठ नागरिक १ लाख ८८ हजार ११ जना छन् । यसको कुल योग १४ लाख ५४ हजार ५ सय ५१ जना हुन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ बाट ७५ बर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रूपैयाँबाट वृद्धभत्ता शुरु गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आएर २ हजारबाट बढाएर ३ हजार पु¥याइएको छ ।
देशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भार वर्षेनि बढ्दो छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ७० वर्षमाथि, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ६० वर्ष माथि (दलित), एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपाङ्गता भत्ता, अशक्त, लोपोन्मुख बालबालिका, दलित बालबालिका, लोपोन्मुख जाति लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरिएको छ ।
उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘एकजना काम गर्न सक्ने महिला, जो निकै धुम्रपान गर्छिन् र उनलाई मैले सोधें– भाउजू कति चुरोट खानुहुन्छ ? पैसा कसरी पुग्छ ? उनले जवाफ दिइन् त्यही बृद्धा भत्ताको भर त हो नि ।’